Forum ဆိုတာ အမေးအဖြေလုပ်တဲ့နေရာလား..? — MYSTERY ZILLION
Forum ဆိုတာ အမေးအဖြေလုပ်တဲ့နေရာလား..?
MMITP မှာ ကိုအိမောင် ရေးထားတဲ့ Post ကိုပဲ ဒီမှာ ပြန်ပြီး မှီငြမ်းလိုက်ပာတယ်.. တစ်ချို့နေရာတွေကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပြီး ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်လိုက်ပာတယ်.. =D
Forum တွေမှာ ပါ၀င်ဖူးသူတိုင်းသိပါတယ်... Forum တွေကို အမေးအဖြေလုပ်ဖို့အတွက် ပိုသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်... အမှန်တော့ Forum ဆိုတာ အမေးအဖြေလုပ်လို့ သိပ်မကောင်းပါဘူး... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Forum ဆိုတဲ့သဘောအရကို Discussion အတွက် နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်... အမေးအဖြေအတွက် လိုအပ်တဲ့ Functionality တွေ မပါ ပါဘူး...
ဥပမာ။ ။ တစ်ခုခုကို သိချင်လို့မေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့... တစ်ချို့ကလဲ သိပ်ကောင်းတဲ့အဖြေတွေ ပြန်ပေးကြပါတယ်... တစ်ချို့ကလဲ နားလည်မှုလွဲပြီး တစ်လွဲဖြေပါတယ်... တစ်ချို့က နောက်ပြောင်ပြီး ၀င်ပြောကြပါတယ်... တစ်ချို့ကလဲ အဖြေကို မကြိုက်တာနဲ့ အဖြေပို ပြန်ငြင်းတဲ့ Off topic တွေပြောကြပါတယ်... ကဲ... အဲ့ဒီထဲက မေးခွန်းအတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေကို ဘယ်လို ပြန်ရွေးထုပ်မလဲ..? သိပ်ကောင်းတဲ့အဖြေက နောက်ကျမှ ဖြေမိလို့ စာမျက်နာ (၅)လောက်ကို ရောက်နေတဲ့အတွက် မကြည့်မိတာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်... ဒီမေးခွန်းကိုပဲ မေးထားမှန်းမသိလို့ နောက်ထပ် အကြိမ်ကြိမ်ပြန်မေးမိတာတွေလဲရှိပါတယ်... မိတ်ဆွေတို့ Forum မှာ တစ်ခုခုကို မမေးခင် အရင် Search လုပ်တာမျိုး လုပ်ဖြစ်ပါရဲ့လား...
ဒါတွေဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Forum ဟာ အမေးအဖြေလုပ်တဲ့ Q&A Site မဟုတ်လို့ပါ... အမေးအဖြေလုပ်ဖို့အတွက် Q&A ဆိုတဲ့ Site အမျိုးအစား သပ်သပ်ကို လိုပါတယ်...
Forum ဟာ Q&A Site မဟုတ်ပါဘူး... မေးခွန်းမေးလို့ရပေမယ့် Q&A Site တွေမှာလောက် မေးလို့ ဖြေလို့ မကောင်းပါဘူး... Q&A site တွေမှာက Voting System ရှိပါတယ်... အကောင်းဆုံးအဖြေကို အလွယ်တစ်ကူ တွေ့နိုင်ပါတယ်...
Programming တွေအတွက်အကောင်းဆုံး Q&A site က Stackoverflow ဖြစ်ပါတယ်...
ဒါကြောင့် မေးခွန်းမေးလိုသူတွေ MZ မှာ မေးနိုင်သလို Q&A Site ဖြစ်တဲ့ Myanmar Overflow မှာလဲ မေးနိုင်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်... Myanmar Overflow ဟာ Programming သီးသန့်မဟုတ်ပါဘူး... မည်သည့် အကြောင်းအရာမဆို မေးနိုင်ပါတယ်...
Myanmar Over Flow ကို ကိုစိုးမင်းမှ စတင်ပြုလုပ်ထားပာတယ်..
မေးသူ ဖြေသူ နှစ်ဦးလုံး အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ Site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်... ဖြေသူတွေအတွက်လဲ ကိုယ့်အဖြေ ကောင်းရင်ကောင်းသလို Reputation တွေတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်... Reputation က ဘယ်နေရာမှာသုံးရမှာလဲ..? Programmer တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ မှတ်ကျောက်ပါပဲ... တစ်ကယ်တက်မှ၊ သိမှ Reputation ကမြင့်မှာပါ... ဒါကြောင့် Reputation မြင့်တာဟာ တစ်ကယ်သိတာလို့ ကြေငြာထားသလိုပါပဲ... ဒါကို လိုသလို Reference လုပ်လို့ရမှာပါ...
ဒါကြောင့် မေးမယ့်သူတွေရော ဖြေမယ့်သူတွေကိုပါ Myanmar Overflow မှာပါ ၀င်ရောက် မေးကြ၊ ဖြေကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်...
=========== ကိုအိမောင် ပြောသည်ကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ထားပာသည် ==========
အရင်တည်းက StakOverFlow ကို ရည်ညွန်းဖူးပာတယ်..
.NET သမားများအတွက် အလွန်ကောင်းပာတယ်.. သူတို့ အသိုင်းအဝိုင်းဟာ .NET အများစုပာ.. .NET ဆိုလို့ တခြားဟာတွေမရဘူးလားလို့မဟုတ်ပာဘူး တခြား Programming နဲ့ ပာတ်သတ်လို့လည်း အရမ်းကောင်းတယ်လို့ Recommend လုပ်ပာတယ်..